IMISEBENZI | Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd.
Konke esikwenzayo, kuphela ukuvumela amakhasimende ukuthi athole izinzuzo eziningi emakethe ukuze athole amathuba amaningi ebhizinisi okwakha inani elengeziwe lamakhasimende ethu nomphakathi.
"Okuqondiswe kumakhasimende", sinikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo ezisezingeni kumakhasimende ethu.
Nikeza Amasampula Wokuhlola
Phendula Ekubonisaneni Ngezobuchwepheshe
Ukwamukela Izicelo Zesevisi
Ukunamathela "ekwanelisekeni kwamakhasimende njengokugxila, ukuthuthukiswa kwekhwalithi okuqhubekayo, ukuphishekela ikhwalithi ephezulu" inqubomgomo yekhwalithi. Qinisa ukukhiqizwa komkhiqizo nezindlela zokuqapha. Gxila ekwenzeni ngcono ukuncintisana okuyinhloko kwamabhizinisi.Ukuhlolwa kokukhiqizwa Ngokuhambisana ngokuqinile namazinga ekhwalithi kazwelonke. Ngokulawulwa ngokuqinile kukalayini wokukhiqiza, ukuzihlola konke kwenqubo, ukuhlolwa kokubambisana nokuhlolwa okuqediwe, imikhiqizo yokuqedela ukuhlolwa ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ngamunye unokwethenjelwa futhi ukhwalithi enhle kakhulu.Wina idumela elivela kumakhasimende nasemakethe, Ukukhuphuka okusheshayo kube yiwo umholi embonini kazwelonke yokucubungula i-aluminium.
Ukuhlolwa Okuqinile, Ukusebenza Okuphephile
IMingtai ihlangabezana nezidingo zomsebenzisi ngokulawulwa okuhle kakhulu kwenqubo, kusukela ekuthengeni kwe-ingot ye-aluminium, ukukhiqiza,
inqubo yokuqinisekisa ukulandelwa kwenqubo, enikeza ukuphepha kwabasebenzisi.
Kusuka ku-oda kuya ekulethweni
Ngenkontileka yokuthengisa, umabhalane wokulandelela i-oda uhlola amamodeli nobungako be-aluminium alloy.
Ukuhlolwa Kwekhwalithi Ngaphambi Kokulethwa
Ngemuva kokuphothulwa kokukhiqizwa komkhiqizo, umhloli wekhwalithi uzobheka ngokuqinile ikhwalithi yenqwaba ngayinye yemikhiqizo, athathe izithombe azithumele kumakhasimende.
Hlola Izinto Lapho Upakisha
Ngaphambi kokupakisha nokuthumela, umabhalane wokulandelela i-oda uhlola izinto ezihlanganisiwe futhi nohlu lokupakisha ukugwema ukulahleka kwezinto.
Hlakulela ukufakwa kwamapulangwe ukuze uvale ingxubevange ye-aluminium, uvimbele ukugcwala kwe-aluminium alloy, futhi uqinisekise ukulethwa okuphelele kwemikhiqizo ngendlela esheshayo, ephephe futhi ethembeke kakhulu.
Kusuka esikimini esakha ukuhlolwa kwamakhasimende, sihlinzeka amakhasimende ngohlelo lwesevisi oluphelele olwakha ukufakwa kwekhwalithi ephelele, enezinhlangothi ezintathu, okwenza amakhasimende abe nokunotha okuphelele futhi okuphelele.
Ukubonisana ngomkhiqizo: Ukwamukela ukubonisana ngezinsizakalo ezinsukwini ezingama-365 ngonyaka.
Iqembu lobuchwepheshe elinamandla: Izixazululo ezisebenza kahle zobuchwepheshe zenzelwe wena.
Izindlela ezahlukahlukene zokusithola: E-mail, Tel, Skype, Facebook, Twitter, Linkedin, Online Chat ...
Isevisi ngesikhathi sokuthengisa
* Izitshalo zokukhiqiza ezihlakaniphe kakhulu.
* Njalo uphendule ngokuqhubekayo komkhiqizo.
* Ukuhlolwa okuqinilengaphambi kokuba kuthunyelwe kumakhasimende.
Ikhwalithi ephezulu nomphathi wokuthengisa onolwazi uzokunikeza iziphakamiso zomkhiqizo ezikhethekile nohlelo lokucaphuna ngemuva kokuqonda izidingo zakho. Ngemuva kokufaka i-oda, ifektri yesimanje ikukhiqizela imikhiqizo esezingeni eliphakeme, futhi ngomnyango wokuhlola, umnyango wokuhlola ikhwalithi nezinye izingqimba zamasheke, ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo ihlangabezana nezidingo zikazwelonke nezamakhasimende ezinkomba.
Ithimba lezinsizakalo ezithengisa ngemuva lizohlelela wena umthwalo wezinto zobuchwepheshe futhi lilandele yonke inqubo ukuqinisekisa ukuphepha kwempahla yakho; uma unezidingo eziphindaphindwayo zokuthengwa kwempahla, iqembu lesevisi elithengisa ngemuva lizokuhlelela isitoko esijwayelekile; uma unemibuzo mayelana nekhwalithi yomkhiqizo, iqembu lesevisi ngemuva kokuthengisa lizokhipha izixazululo kuwe ngokushesha okukhulu.
IKaichuang aluminium ikunikeza ngenqubo ephelele, insizakalo edidiyelwe kanye nezinduna. Yonke i-oda, kusukela kokubonisana kwangaphambi kokuthengisa kuya ekulethweni kwangemva kokuthengisa, siyalandelela ngesikhathi esifanele ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angathola izimpahla ngokuphepha, insizakalo yabaphathi, abasondelene, abathembekile.Siyakwamukela amakhasimende ukuvakashela imboni yethu. Futhi singakunikeza isampula mahhala. Enqubeni yokuhlola umkhiqizo, sihlela ukuhlolwa kokukhiqizwa ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba. Ngokuhlola okuqinile ngokucophelela kolayini wokukhiqiza zonke izinqubo zokuzihlola, isheke lokuhlola kanye nokuhlolwa okuqediwe, imikhiqizo yokuhlola ephelile, Siqinisekisa ukuthi yonke ingxenye yomkhiqizo wethu ithembekile. Ukuhlangana masonto onke, ukuthola izinkinga, kuzixazulule ukuze uthole insizakalo engcono. Uma amapuleti ethu e-aluminium enezinkinga zekhwalithi, sizozama konke okusemandleni ukuxazulula lokho.
intengo yeshidi le-aluminium, Eshibhile Aluminium AmaSpredishithi, intengo ye-aluminium 6061 intengo, Abahlinzeki be-Aluminium Sheet Metal Anodized, I-Tread Plate Aluminium AmaSpredishithi, 7050 aluminium ishidi,